Cishe bonke abazali babone ukuthi ingane yabo ihleka kanjani iphupho, noma kusho okuthile okungenakuqondakala. Ngabe iziphi izizathu ingane ekhuluma ngayo ephusheni, futhi abazali kufanele bakhathazeke ngalokhu?
Kubonakala sengathi abanye abazali bathi uma ingane ikhuluma ngesikhathi sokulala, kusho ukuthi lokhu akuvamile, futhi kunalokho imholela kuye ochwepheshe. Kodwa awudingi ukudweba iziphetho ngokushesha. Ucwaningo oluningi lwezokwelapha luye lwafakazela ukuthi wonke umuntu wamashumi amabili angakwazi ukukhuluma ephusheni, futhi phakathi kwezingane ezincane lokhu kwenzeka kaningi. Lesi simo singachazwa yiqiniso lokuthi ezinganeni isimiso sezinzwa asinamandla, kodwa kubantu abadala sinezinzile.
Empeleni, ingxoxo ephusheni ayikwazi ukulimaza impilo, futhi, ngokuphambene nalokho, iyasiza ukuvumelanisa nemvelo. Konke okuye kwanda emqondweni wengane yengane - imizwelo emihle noma emibi, okuhlangenwe nakho, kuba yizingcindezi eziyingqayizivele. Futhi konke lokhu kubonakala ephusheni ngesimo se-bble engavamile, ngoba ubuchopho ezinganeni ezincane akuthuthukisiwe ngokuphelele. I-Somnilokvia - ngakho-ke okuthiwa ngokwesayensi okuthiwa umsebenzi ekukhulumeni.
Ngabe iziphi izizathu lapho umntwana ekhuluma ephusheni?
Isizathu esiyinhloko esenza ingane ikhulume ngephupho ibhekwa njengokucindezeleka kosuku. Kulokhu, ukucindezeleka akusona isimo esibi. Lokhu kungaba imizwelo ecacile noma ukusabela ezenzakalweni ezehlukene. Futhi uma kungenakwenzeka okungaphezu kwemvelo, ngakho-ke akusadingeki sikhathazeke, futhi ngisho nangaphezulu, asikho isidingo sokubonisana nodokotela. Futhi, akudingeki unikeze imithi yakho yokudambisa ingane noma imisele ngamakhemikhali. Uma ingane ithatha imithi yokwelashwa, lokhu kufanele kube yindlela yokwelapha ngaphansi kokuqondiswa kochwepheshe.
Uma ingane ingabonakali izimpawu ze-neurotic futhi ingabona ukuthi ivele iphupha ephusheni, akufanele iphathwe. Kodwa udinga ukulalela imithetho ethile:
hhayi ukunikeza ingane ingcindezi enkulu,
okungaphezulu ukuba kuvulekile,
ungangivumeli ngibheke i-TV kuze kube sekwephuzile,
gcina indawo enokuthula emndenini,
ventilate igumbi yengane bese ulondoloze izinga lokushisa elikhulu.
Futhi uma ingane isabela ngokungafaneleki ukumemeza noma ukukhala, khona-ke ungaxhumana nodokotela. I-neurologist izohlinzekela indlela yokwelapha ngemikhiqizo yokwelapha ene-nootropic noma imiphumela yemethamo. Bathuthukisa ukulala nokuziphatha kwengane, ngcono ukujikeleza kwegazi ebuchosheni.
Ukuguquka phakathi kwezigaba zokulala.
Izingxoxo emphupheni ezinganeni zisacaciswa ukuguqulwa kwesinye isigaba sokulala komunye, ngoba le nqubo ingakaze yenziwe emzimbeni ongafundiwe. Izigaba zokulala kwabantu zihlukaniswe ngokusheshisa futhi ziphuza, okuyinto ngezikhathi ezithile zithintana nomunye ngemizuzu 90-120. Ngokusho kwemiphumela yokufundwa kokungabaza, ososayensi bakholelwa ukuthi ingxoxo iyenzeka phakathi nesigaba sokulala kancane, ukulala ngokukhululekile, ngesikhathi sokulala, lapho umuntu eqhubeka ephendula imisindo ehlukene. Umsebenzi wokukhuluma uvela esigabeni sokulala okusheshayo, okuyilapho kukhona amaphupho, izinyathelo zokuthuthumela futhi kukhona ukunyakaza okusheshayo kwama-eyeballs. Ngesikhathi ingane ingapheli, ngemuva kokusho amagama ambalwa, ukulala okwengeziwe, abazali akudingeki bakhathazeke. Kwanele nje ukucindezela ingane bese uyilahla ngamazwi ahlabayo.
Ukuthola ulwazi olusha.
Izingane ezincane kakhulu, ezingakwazi ukukhuluma, nazo zine "iphupho". Lawa mazwi noma imishwana ingane ekushoyo ephusheni yimbangela yolwazi olutholiwe ngosuku olwedlule. Ukumemezela amagama amasha ngenkathi elele, izingane ezincane sezivele zibuyele ngokucophelela. Ngakho-ke, abazali bangajabula, futhi bangakhathazeki, njengoba ingane iqala ukuthuthukisa futhi ivuselele imithwalo yakhe yamagama nolwazi.
Kumele kuqashelwe ukuthi uma inkulumo yomntwana ngesikhathi sokulala ihambisana nezinkinga zokukhathazeka - kungenzeka ukuthi lezi zibonakaliso zesifo sezinzwa. Ngokuzithoba ungakwazi ukubona izinkinga zesimiso sezinzwa ezinganeni ngezinye izimpawu. Lezi zibonakaliso ezinjengokuthi, ngesikhatsi ingxoxo ephusheni ingane ihlanganiswa ukujuluka okuncane, ukukhala ephusheni, ukukhukhuma kabi, ukubona ubusuku obuphushukile ephusheni, ingabonisa izimpawu zokulala, ukuvuthwa, lapho evuka, ayiqondi ukuthi ikuphi. Zingasho ukukhubazeka kwengqondo. Futhi lapha kulesi simo sekuvele kudingekile ukubhekana nochwepheshe - ku-neurologist, isazi sezengqondo, isazi sezinkanyezi, futhi, hhayi ukuhlehlisela emuva. Kodwa ngaphambi, ngaphambi kokuya kudokotela, kuyadingeka ukuthola ukuthi ingane iyamkhathaza yini, mhlawumbe uyesaba okuthile. Lokhu kufanele kusize ekusunguleni ukuxilongwa okulungile.
Umzimba wakwamanye amazwe endlebeni nasenhlakeni
Ukwelashwa kwe-diathesis ngamakhambi abantu
Ungamisa kanjani ukuqhubeka kwe-myopia ezinganeni
Kunokuba uvikele isikhumba somntwana kusuka efrijini
I-Massage Therapy for Ingane
Indlela yokukhulisa imilenze yengane yakho?
Kuthiwani uma ingane ibona okuvinjelwe?
Kuthiwani kumuntu owenza ubulili bokuqala
Ukupheka okumnandi, izitsha ezishisayo
Izidakamizwa ezinhle zemizwa nokucindezeleka
I-Risotto ne-tomato kanye ne-asparagus
I-Nogodochki - isithombe somklamo wangempela nemifashini ye-manicure
Abesifazane, siqala ukuthukuthela kahle!
I-Ombre - umkhuba omusha wangaphakathi-2016
Nginakekela kanjani i-heater yamanzi?
Izakhiwo eziwusizo ze-horseradish
UMitya Fomin ezitolo ezitolo zesitolo, isithombe
I-Feijoa enoju, iresiphi ngesithombe
U-Anna Grachevskaya watshela ngokukhulelwa futhi waziqhenya ngokugqoka kocansi, isithombe
Indlela yokuhlanza umzimba emva kokuthatha ama-antibiotics
I-baked meat in multivariate